कानुनी कुरा Archives | Nepali In Japan
15Mar By Nepali In JapanNo Comments
जापानमा विद्यार्थी भिसामा कसरी परिवर्तन गर्ने ?
जापानमा अरु भिसालाई विद्यार्थी भिसा बनाउन चाहने कयौं कारण हुन सक्छन् । तपाईसँग जापानको वर्क भिसा छ तर आफ्नो भाषा क्षमता सुधार्न पूरै समय पढ्ने इच्छा हुन सक्छ । वा एक वर्षको वर्किङ होलिडे भिसा छ । तर जापानमा लामो समय बसेर भविष्य यही बिताउने चाहना होला । यस्तो अवस्थामा जापानबाटै अहिलेको भिसालाई विद्यार्थी भिसामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यसबारे तपाईले थाहा पाउनु पर्ने केही कुराहरु छन् । आजको यस लेखमा हामीहरुले यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौं । जापानमा विद्यार्थी भिसामा परिवर्तनको प्रक्रिया तपाईले जापानमा भाषा विद्यालयमा पूरा समय पढ्नेबारे सोचिरहनु भएको छ भने शुरुमा यसको सम्भाव्यताबारे अध्यागमन विभागमा सोधपुछ गर्नुहोस् । हरेकको विद्यमान भिसाको म्याद फरक फरक हुन सक्छ । अनि तपाई वर्क भिसामा हुनु हुन्छ भने तपाईको रोजगारीको करारसम्बन्धी विवरणमा पनि यो भर पर्छ । भाषा विद्यालयहरुले व्यक्तिगत केस हे...
2Feb By Nepali In JapanNo Comments
जापानको फोहोर संकलन र व्यवस्थापन प्रणाली निकै जटिल छ । तर तपाई निराश नहुनुहोस् । आजको यस लेख पढिसकेपछि भने तपाईले सहजै फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ । फोहोर कहाँ जान्छ ? जापानमा कयौं विदेशीहरुले, इन्टरनेटमा होस् वा वास्तविक जीवनमा, गुनासो गरिरहने हुरा हो : यहाँका सार्वजनिक स्थलमा फोहोर क्यानहरु किन देखिदैंन ? तपाईले कुनै सुपथ स्टोरबाट बेन्तो बक्स किन्नु भयो भने तपाईले दिनभर यसको खाली प्लाष्टिक कन्टेनर बोकेर हिड्नु पर्दछ । ‘तर किन’ तपाईहरुले भनेको मैले सुनेको छु । ‘जापानीहरुले साँँच्चै यस्तो गर्छन त ?’ यसको जवाफ हुन्छः हो । जपानीहरुमा आफुसंग भएको फोहोर आफ्नै घरमा घरमा लैजाने बानी छ । अनि जब घरमा पुग्छन् एक एक गरेर फोहोर छुट्टयाउँछन् । तर किन ? जापान साँघुरो देश हो । खुला स्थान सीमित बनेसँगै सडकमा छोडिएको थोरै फोहोर पनि स्पष्ट देखिन्छ । टोकियो र अन्य ठूला शहरहरुमा फोहोर राख्ने झोल...
21Jan By Nepali In JapanNo Comments
जापानमा भएकामध्ये धेरैको समस्या यहाँको कर तथा सामाजिक सुरक्षाका विषयमा आवश्यकता अनुसार जानकारी पाउन नसक्नु हो र जसको एउटै कारण हो भाषा । प्राप्त सूचनाहरु जापानी भाषामा हुने, घरमा आउने चिठीहरु पनि जापानीमै लेखिएका हुँदा धेरैलाई समस्या पर्छ । अहिले भने धेरै सिटी अफिसहरुले यस सम्बन्धि जानकारीहरु आफ्नो वेवसाइटमा अंग्रेजी भाषामा पनि राख्ने गरेका छन् । केही जानकारी आवश्यक पर्दा सिटी अफिसका वेवसाइटहरु हेर्नु उपयोगी हुन्छ ।जापानको कर तथा सामाजिक सुरक्षाले कसरी काम गर्छ, तपाइलाइ यसको आवश्यता छ कि छैन, के कसरी तिर्नुपर्छ भनेर जान्न चाहनेहरुका लागि भने आजको लेख उपयोगी हुन सक्छ । के तपाइले जापानमा कर तिर्नु पर्छ? जहाँ बसेर पैसा कमाउनु हुन्छ त्यहाँ कर तिर्नुपर्ने शर्तबाट जापान पनि अछुतो छैन । जापानमा तपाइले तिर्नु पर्ने करको रकम तपाय त्यहाँको बासिन्दा भए÷नभएको कुरामा निर्भर हुन्छ । त्यहाँको बासिन्दा ...
19Jan By Nepali In JapanNo Comments
कर्मचारीका लागि कुनै पनि रोजगारदाता वा कम्पनीले दिने कल्याण भत्ता निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । जागिर खोजीका क्रममा कर्मचारीहरुले आफूले के कस्ता कल्याण भत्ता पाउन सक्छु भन्नेबारे विचार गर्छन् । जापानमा कानूनले तोकेको केही भत्ताहरु छन् । यसको साथमा कम्पनीहरु आफैले निर्धारण गरेको केही भत्ताहरु पनि छन् । यी मध्ये केही कल्याण भत्ता जापानी कम्पनीहरुमा मात्रै उपलब्ध छन् । आजको यस लेखमा हामीहरुले जापानी कम्पनीमा उपलब्ध कल्याण भत्ताको प्रकार र यसको विषयबारे कुराकानी गर्न गइरहेका छौं । के हो कल्याण भत्ता ? कल्याण भत्ता भनेको तलब बाहेक दिइने सेवा वा सुविधा हो । यो कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराउँछ । यसको उद्देश्य कर्मचारी र तिनका परिवारका सदस्यहरुको जीवनशैलीलाई आर्थिक र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट स्थीर बनाउनु हो । कल्याण भत्ता राम्रो हुँदा कर्मचारीहरु कठिन परीश्रम गर्न प्रेरित हुन्छन् अनि यसले उ...
जापानी कार चालकको स्तर उनीहरुको कारमा टाँसेको स्टिकरका आधारमा थाहा हुन्छ । आजकोे लेखमा यसै विषयमा केही जानकारी दिने तयारी गरिएको छ । यहाँ जापानका कारमा टाँसिएका केही सामान्य स्टिकर र तीनले दिने अर्थका बारेमा जानकारी प्रस्तुत छ । जापानमा गाडिको लाइसेन्स लिने तयारीमा हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि यो जानकारी उपयोगी हुनसक्छ । नयाँ चालकको स्टिकर यो शुरुआती चालक बुझाउने सबैभन्दा स्पष्ट प्रतीक हो । व्यक्तिले जब आफ्नो पहिलो लाइसेन्स लिएपछि आफ्नो कारमा यो स्टिकर टाँस्नुपर्ने हुन्छ । उसले एक वर्षसम्म सो स्टिकल राखेपछि मात्रै हटाउन पाउँछ । वृद्ध स्टिकर यो संकेतले चालक उमेरमा केही वृद्ध रहेको र उनले विस्तारै गाडी हाँक्न सक्ने बुझाउँछ । यो संकेतले दुर्घटना कम गर्न र खराब चालकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएपनि यसले चालक बुढो भएको र युवा चालकको तुलनामा बढी धैर्यताको आवश्यक पर्न सक्ने भन्ने कुरा अ...
जापानमा चालक अनुमति पत्र लिएपछि निश्चित समयको अन्तरालमा यसलाई नवीकरण गर्नु पर्दछ । नवीकरण गर्न बिर्सनु भयो भने तपाईले चालक अनुमति गुमाउनु हुनेछ । त्यसैले निर्धारित अवधिभित्र यसलाई नवीकरण गर्न नभुल्नु होला । आजको यस लेखमा मैले चालक अनुमति पत्रको वैध अवधि र यसलाई कसरी नवीकरण गर्ने भन्नेबारे बताउन गइरहेकी छुँ । चालक अनुमति पत्रको प्रकार र वैध अवधि जापानमा तीन प्रकारको चालक अनुमति पत्र प्रचलनमा छः हरियो, निलो र गोल्ड । अनुमति पत्रको प्रकार यसैको पछाडिपट्टि लेखिएको हुन्छ । वैध रहने अवधि चालक अनुमति पत्रको पृष्ठभूमिको रंग हेरेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ । निलो अनुमति पत्रलाई भने तीन ओटा श्रेणीमा विभाजित गरिएको छ । कूल गरेर चालक अनुमति पत्रको पाँच वर्ग छन् र हरेकको वैधानिक अवधि फरक छ । हरियो चालक अनुमति पत्र (नयाँ चालक अनुमति पत्र) - वैधानिक अवधिः अनुमति पत्र लिएको मितिदेखि तेस्रो जन्मदिनको एक...
10Jan By Nepali In JapanNo Comments
तपाइलाई जापानमा आएर सेल्स पर्सनको रुपमा काम गर्ने इच्छा छ ? यसको लागि कुन भिसा चाहिन्छ ? आजको यो लेख यसै विषयमा केन्द्रीत छ । ‘मानविकीमा विज्ञ’ सेल्सपर्सनका लागि ‘इञ्जिनियर/मानविकीमा विज्ञ/अन्तरराष्ट्रिय सेवा’ श्रेणीकोे वर्किङ भिसा चाहिन्छ । यद्यपि, सेल्स व्यवसाय ‘मानविकीमा विज्ञ’ श्रेणीमा परेपनि वर्गीकरण प्राविधिक विक्री र अन्तरराष्ट्रिय विक्री मध्ये कुनमा पर्छ भन्ने चाँहि अस्पष्ट छ । यस विषयलाई कसरी हेर्ने अनि भिसा आवेदनको तयारी कसरी गर्ने भन्ने बारे हामी बताउनेछौं । अध्यागमन नियन्त्रण कानूनले ‘मानविकीमा विज्ञ’ अन्तर्गतका गतिविधिलाई निम्नानुसार परिभाषित गरेको छः विधिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र र अन्य सामाजिक विज्ञासँग सम्बन्धित ज्ञान चाहिने व्यवसायमा आबद्ध भएका गतिविधि, जुन जापानका सार्वजनिक र निजी संस्थासँग करारको आधारमा प्रदर्शन गरिन्छ । (पा्रध्यापक, कला, व्यवस्थापन, कानू...
4Jan By Nepali In JapanNo Comments
यस्तो हुन्छ ‘उच्च कौशल भएका व्यक्ति’लाई जापानमा सेवा सुविधा
सन् २०१२ मा ल्याइएको उच्च कौशल पेशा भिसा (विदेशीमाझ HSP भनेर परिचित, Highly-Skilled Foreign Professionals) का थुप्रै फाइदाहरु छन् र यो उच्च कौशल भएका विदेशी प्रतिभावान कामदारप्रति लक्षित भिसाको प्रकृति हो । उच्च कौशल भएका व्यक्तिले जापानी आर्थिक वृद्घि उकास्न नयाँ माग पूर्ती गर्न सक्षम हुने आशा लिइएको छ त्यसैले विशिष्ट शैक्षिक अनुसन्धान गतिविधि (Advanced academic research activities), विशिष्ट विज्ञ/प्राविधिक गतिविधि (Advanced specialized/technical activities) र विशिष्ट व्यवसाय व्यवस्थापन गतिविधि (Advanced business management activities) उच्च कौशल विदेशी पेशामा पर्छन् । शैक्षिक अनुसन्धानकर्ता (Academic researchers), इञ्जिनीयर(Engineers), प्रशासक (Administrators) र कुनैपनि विषयमा विज्ञता हासिल गरेका अन्यलाई पनि माथिका तीन मध्ये एक क्याटागोरीमा राखिएको छ । उच्च कौशल विदेशी पेशाका लागि योग्य ...
यसकारण बलियो छ जापानमा महिला सम्बन्धी कानून
महिलावादी आन्दोलनले गति लिन थालेको र बढी महिलाहरु सरकारी कार्यालयमा निर्वाचित हुन थालेसँगै जापान महिलाहरु समृद्धिको बाटोतर्फ बढी अग्रसर हुने राष्ट्रका रुपमा विकसित हुन थालेको छ । आजको लेखमा जापानको महिलामैत्री कानूनबारे केही जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ । १. पारपाचुके गर्ने अधिकार विवाहमा पारपाचुके सामान्य कुरा भएपनि महिलाहरुका लागि अझै पनि यो नयाँ विषय हो । जापानको नागरिक कोड (सन् १८९६ को एक्ट ८९ पनि भनिने) ले महिलालाई आफ्नो पार्टनरसँग छुट्टिने अधिकार प्रदान गर्यो । केही शताब्दीसम्म जापानमा म्याट्रिमोनी रहेको भएपनि १ सय वर्ष अघि मात्रै यसको अन्त्य गर्ने अधिकार आधालाई प्राप्त भयो । खराब विवाहबाट छुटकारा पाउने कुनै उपाय नभएको भए ने गर्ने भन्ने कुराको कल्पना सम्म पनि गर्न सकिँदैन । साथै नागरिक कोडले नजिकको आफन्तबीचको विवाहलाई पनि रोक लगाउँदै नाबालकले विवाह गर्दा अभिभावकको स्विकृति लिनुपर्न...
जापानमा प्रहरीले पक्रेपछि के हुन्छ ? के छ कानूनी प्रावधान ?
पछिल्लो समय विभिन्न घटनामा जापानमा नेपालीहरु प्रक्राउ परिरहेको समाचार बेला–बेलामा आउँछ । तर जापानमा पक्राउ परेपछि के–के प्रक्रियाहरु हुन्छन्, कानूनी उपायहरु के–के छन् भन्नेवारेमा यहाँ रहेका अधिकांश नेपालीहरुमा रहेको अनविज्ञता भने कायमै छ । आजको जानकारी अपराधसम्बन्धि मुद्धा मामिला हेर्ने नाकामुरा इन्टरनेशनल क्रिमिनल डिफेन्स एलपिसीको सहयोगमा केही जिज्ञाशाहरु मेटाउने प्रयास गरिएको छ । प्रश्नः म जापानमा पक्राउ परे भने के हुन्छ ? उत्तरः यदि वारेन्ट जारी गरी पक्राउ गर्न लागिएको हो भने प्रहरीले तपाईलाई वारेन्ट देखाउने छन् । तपाईलाई स्पटबाटै पक्राउ गरिएको हो भने चाँहि वारेन्ट हुँदैन । तर उनीहरुले तपाई पक्राउ पर्नुको कारण भने बताउनेछन् । पक्राउ गरेपछि तपाईलाई थानामा लगिनेछ । प्रहरीले रेकर्डका लागि तपाईमाथि लागेको अभियोगबारे लेखेर राख्नेछन् र तपाईले वकिल नियुक्त गर्न सक्ने अधिकारबारे पनि बताउनेछन्...
3Jan By Nepali In JapanNo Comments
डिभोर्सपछि जापानी भिसा के हुन्छ ?
कुनै विदेशीले आफ्नो जापानी श्रीमतिबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्नका लागि निवेदन दिन्छ भने सो क्षणमा उसको भिसा ‘जापानी नागरिकको पति’ हुन्छ । उसले जापान बस्न पाउने समय चाँडै नै सकिन्छ । के उ स्थायी रुपमै जापानमा बस्न सक्छ त ? सम्बन्ध बिच्छेद गरेपछि पनि उ जापानमा बस्न सम्भव छ ? आजको जानकारी यसै विषयमा छ । सिद्धान्ततः सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया नसकिएसम्म उ जापानमा बस्न सक्छ । तर उसले आफ्नो भिसा परिवर्तन गर्न सकेन भने चाँहि उ जापानमा बस्न पाउँदैन । सम्बन्ध बिच्छेदको प्रक्रिया चलिरहेको बेलामा भिसा जापानमा बस्नको लागि विदेशी नागरिकसँग कुनै न कुनै प्रकारको भिसा हुनु पर्छ । अधिकांश अवस्थामा, विदेशी नागरिकले जापानी नागरिकसँग विहे गरेको छ भने उसले ‘जापानी नागरिकको पति’को रुपमा भिसा पाउँछ । अनि उसले ६ महिना देखि ३ वर्षसम्म त्यहाँ बस्ने अनुमति पाउँछ । यो समय पछि पनि विदेशी नागरिकले जापानी महिलासँग विवाह...
जापानको बीमा र कर प्रणालीबारे तपाईले बुझ्नैपर्छ यि कुराहरु
जापानमै हुनुहुन्छ वा नेपालबाट जापान आउने तयारीमा हुनुहुन्छ ? उसोभए जापानबारे तपाईले थाहा पाउनु पर्ने धेरै कुरा छन् । तपाइले बुझ्नै पर्ने र ध्यान दिनु पर्ने कम्तिमा २ महत्वपूर्ण पक्षा भनेको यहाँको बीमा र कर प्रणाली पनि हो । आजको यस लेखमा हामीहरु यी दुई विषयबारे कुरा गर्न गइरहेका छौं । १. सामाजिक सुरक्षा सामाजिक बीमा यहाँको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमध्ये एक हो । यसमा २ प्रकारको बीमा छः कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा (ईएचआई) र कर्मचारी पेन्सन बीमा (ईपीआई) । तपाइसँग आवासीय हैसियत छ र यसले तपाइलाई कुनै पनि कम्पनी वा व्यवसायिक संस्थामा काम गर्ने अनुमति दिएको छ भने तपाइले यी बीमाको प्रिमियम सोही कम्पनी वा संस्था मार्फत तिर्नु हुन्छ । कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा (ईएचआई) यसलाई जापानी भाषामा केन्कोउ होकेन भनिन्छ । ईएचआई अन्तर्गत तिर्नु पर्ने मासिक प्रिमियम तपाइको तलबको आधारमा गणना गरिन्छ । यसलाई तपाइ अनि...
20Dec By Nepali In JapanNo Comments
कम्पनीले श्रम कानूनको उल्लङ्घन गर्यो भने के गर्ने?
यदि तपाइ खराब काम गर्ने वातावरणमा कुनै समय पर्नुभएको छ भने जापानमा कम्पनीलाई चुनौती दिने कुरा सजिलो छैन भन्नेबारे त तपाइलाई राम्रै जानकारी होला । ओभरटाइमको पैसा नदिने, बिदाका क्षतिपूर्ती दिन अस्विकार गर्ने लगायतका कुरा जुनसुकै राष्ट्र पनि हुन्छ । यस्तो कुनै पनि विदेशी राष्ट्रमा बस्दा भयो भने त तपाइलाई यसको सामना कसरी गर्ने भन्नेबारे बुझ्न झन् कठिन हुन्छ । अझ जापानी भाषाको ज्ञान छैन भने त कहाँबाट शुरु गर्ने भन्ने नै थाहा हुँदैन । जापान सराकारले यस्ता शोषण र खराब काम गर्ने वातावरणमाथि अंकुश लगाउन प्रयासहरु जारी राखेको छ । आजको लेखमा कम्पनीले गर्न मिल्ने र गर्न नमिल्ने कुराका बारेमा जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ । कम्पनीले तपाइको भिसा रद्द गर्न सक्दैन तपाइको भिसा जापान सरकारले जारी गर्छ र कम्पनीले त त्यस भिसालाई प्रायोजन मात्रै गर्ने हो । एकपटक भिसा दिइसकेपछि कुनै पनि विशेष परिस्थितीबाहेक...